Fiorentina oo diyaarisay lacagta ay ku iibineyso Dusan Vlahovic bishii Janaayo | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Fiorentina oo diyaarisay lacagta ay ku iibineyso Dusan Vlahovic bishii Janaayo
Fiorentina ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay iibiso Dusan Vlahovic bisha Janaayo, ka dib markii weeraryahanka uu diiday dalabkoodii ugu dambeeyay ee qandaraaska.
Milkiilaha La Viola Rocco Commisso ayaa bayaan uu soo dhigay website-ka kooxda ku sheegay inay ‘dalab muhiim ah’ u gudbiyeen xiddiga heerka caalami ee reer Serbia, taasoo ka dhigi lahayd ‘ciyaaryahanka ugu mushaarka badan taariikhda kooxda’.
Si kastaba ha ahaatee, Vlahovic – oo weli labo sano uga harsan tahay qandaraaskiisa haatan – ayaa go’aansaday inuu iska diido shuruuddan cusub iyadoo ay jiraan warar la isla dhexmarayo oo sheegaya inuu u dhaqaaqayo Premier League.
Manchester City , Manchester United , Tottenham Hotspur iyo Arsenal ayaa dhammaantood lala xiriiriyay 21 jirkaan, kaasoo Fiorentina ay hadda diyaar u tahay inay ku iibiso suuqa ugu dhow aduun dhan £ 76.5m (€ 90m), sida laga soo xigtay Gazzetta dello Sport .
Kooxda ka dhisan Serie A ee Juventus ayaa sidoo kale xiiseyneysa saxiixa Vlahovic, si kastaba ha ahaatee uma diyaar garoobin inay la jaan qaadaan qiimeynta Fiorentina ee ciyaaryahanka sababo la xiriira dhaqaala xumadooda.
Vlahovic ayaa dhaliyay 35 gool 92 kulan oo uu u saftay tartamada oo dhan La Viola, oo ay ku jiraan lix gool sideed kulan oo uu ciyaaray ololahan.
Previous articleShearer iyo Lineker oo ka hadlay Goolasha uu Ronaldo ka dhalinayo Horyaalka Premier leaguega Sanadkan
Next articleDaawo: Askari Muqdisho ugu dilay askari saaxiibkiis ahaa qol shukaansi dartiis
Rio Ferdinand oo sheegay in Xushmad daro loola Dhaqmay Lionel Messi...